အစ်မဖြစ်သူအတွက် G-Dragon ရဲ့ ထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင် – Trend.com.mm
အစ်မဖြစ်သူအတွက် G-Dragon ရဲ့ ထူးထူးခြားခြားလက်ဆောင်
Posted on November 5, 2018 by Noel
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ G-Dragon ရဲ့ အစ်မဖြစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ အချစ်ကို ပရိသတ်တွေက အံ့သြနေကြပါတယ်။နှုတ်ကနေ ချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေစရာမလိုပဲ သက်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ။
နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ့က Soompi မီဒီယာကနေ မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။G-Dragon ဟာ အခုလက်ရှိ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
သူ့ရဲ့အစ်မ Kwon Dami ဟာ အင်စတာဂရမ်မှာ “You’re more than qualified to be loved. So sweet @xxxibgdrgn” ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။သူ့မောင်လေးဟာ အချစ်ခံရဖို့ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေထက်တောင်ပိုပြီးသာလွန်နေပါတယ်ပေါ့။လက်ဆောင်လေးကတော့ တန်ဖိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဆောင်းဦးရာသီမှာကြွေတတ်တဲ့ သစ်ရွက်လေးပါ။အဲ့ဒီလိုသစ်ရွက်လေးတွေဟာ စက်တင်ဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလကြား ကျရောက်တဲ့ဆောင်းဦးရာသီ ကြားကာလလေးမှာ ကြွေတတ်ပြီး နဂိုမူလအစိမ်းရောင်ကနေ ဆောင်းရာသီဝင်စရက်တွေမှာဆို အနီ၊အ၀ါ၊ခရမ်း၊အမည်း၊လိမ္မော်၊ပန်းရောင်၊အပြာရောင်၊အညိုရောင်စသဖြင့် အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
အင်စတာဂရမ်စတိုရီမှာလည်း “ဘယ်လိုတောင်ချစ်တတ်တဲ့အမျိုးသားလဲ…ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ကျွန်မမောင်မဟုတ်ပဲ ဒီလိုချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသားမျိုး တစ်ခြားဘယ်သူများရှိပါဦးမလဲ? သူကျွန်မကို ပေးဖို့လက်ဆောင်ရှိတယ်လို့ပြောပြီး လက်ထဲကို ဒီသစ်ရွက်လေးထည့်ပေးခဲ့တာ။အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ”ဆိုပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သိမ်းဆည်းထားပြီး ပေးခဲ့တာလေးက တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းထက်တောင်ပိုပြီး မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ပါသေးတယ်။ပရိသတ်တွေက “ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့မောင်” “ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ကောင်လေးပဲ” “ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအမျိုးသား။ဒီလိုမောင်လေးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားတာမင်းအရမ်းကံကောင်းတယ်။ငါတို့ သူ့ကိုအရမ်းလွမ်းနေတာ။မင်းလည်း သူ့ကိုလွမ်းနေမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်” စသဖြင့် ကောမန့်တွေမျိုးစုံရေးသားကာ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုချစ်ခင်ကြောင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။
နာမညျကြျောအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ G-Dragon ရဲ့ အဈမဖွဈသူအပျေါထားတဲ့ အခဈြကို ပရိသတျတှကေ အံ့သွနကွေပါတယျ။နှုတျကနေ ခဈြတယျဆိုတာကိုပွောနစေရာမလိုပဲ သကျသပွေလိုကျသလိုပါပဲ။
နိုဝငျဘာ ၁ရကျနကေ့ Soompi မီဒီယာကနေ မောငျနှမနှဈယောကျရဲ့အခဈြကိုဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။G-Dragon ဟာ အခုလကျရှိ စဈမှုထမျးဆောငျနတောဖွဈပွီး သူ့ရဲ့အဈမဖွဈသူ လာတှတေဲ့အခြိနျမှာ လကျဆောငျလေးတဈခုပေးခဲ့ပါတယျတဲ့။
သူ့ရဲ့အဈမ Kwon Dami ဟာ အငျစတာဂရမျမှာ “You’re more than qualified to be loved. So sweet @xxxibgdrgn” ဆိုပွီး ရေးထားပါတယျ။သူ့မောငျလေးဟာ အခဈြခံရဖို့ လိုအပျတဲ့အရညျအခငျြးတှထေကျတောငျပိုပွီးသာလှနျနပေါတယျပေါ့။လကျဆောငျလေးကတော့ တနျဖိုးကွီးမဟုတျပါဘူး။ဆောငျးဦးရာသီမှာကွှတေတျတဲ့ သဈရှကျလေးပါ။အဲ့ဒီလိုသဈရှကျလေးတှဟော စကျတငျဘာလနဲ့နိုဝငျဘာလကွား ကရြောကျတဲ့ဆောငျးဦးရာသီ ကွားကာလလေးမှာ ကွှတေတျပွီး နဂိုမူလအစိမျးရောငျကနေ ဆောငျးရာသီဝငျစရကျတှမှောဆို အနီ၊အဝါ၊ခရမျး၊အမညျး၊လိမ်မျော၊ပနျးရောငျ၊အပွာရောငျ၊အညိုရောငျစသဖွငျ့ အရောငျအမြိုးမြိုးပွောငျးသှားတတျပါတယျ။
အငျစတာဂရမျစတိုရီမှာလညျး “ဘယျလိုတောငျခဈြတတျတဲ့အမြိုးသားလဲ…ခဈြဖို့ကောငျးလိုကျတာ။ကြှနျမမောငျမဟုတျပဲ ဒီလိုခဈြခငျနှဈလိုဖှယျကောငျးတဲ့အမြိုးသားမြိုး တဈခွားဘယျသူမြားရှိပါဦးမလဲ? သူကြှနျမကို ပေးဖို့လကျဆောငျရှိတယျလို့ပွောပွီး လကျထဲကို ဒီသဈရှကျလေးထညျ့ပေးခဲ့တာ။အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတာပဲ”ဆိုပွီးရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သိမျးဆညျးထားပွီး ပေးခဲ့တာလေးက တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးထကျတောငျပိုပွီး မှတျမှတျရရဖွဈပါသေးတယျ။ပရိသတျတှကေ “ခဈြဖို့ကောငျးလိုကျတဲ့မောငျ” “ရိုမနျတဈဆနျတဲ့ကောငျလေးပဲ” “ကမ်ဘာပျေါမှာ ခဈြဖို့အကောငျးဆုံးအမြိုးသား။ဒီလိုမောငျလေးမြိုး ပိုငျဆိုငျထားတာမငျးအရမျးကံကောငျးတယျ။ငါတို့ သူ့ကိုအရမျးလှမျးနတော။မငျးလညျး သူ့ကိုလှမျးနမေယျဆိုတာသခြောပါတယျ” စသဖွငျ့ ကောမနျ့တှမြေိုးစုံရေးသားကာ မောငျနှမနှဈယောကျကိုခဈြခငျကွောငျးဖျောပွထားကွပါတယျ။
ဇာတ်ကားအသစ်အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Kim Sun Ah
လက်သည်းပေါ်မှာ ဘာလို့ အဖြူရောင်အစင်းကြောင်းအစက်အပြောက်တွေဖြစ်လာတာလဲ?